Kutheni (kwaye kanjani) ukudibanisa ukuphinda ungene kwiSicwangciso sakho seDijithali | Martech Zone
Kutheni (kwaye Njani) ukudibanisa ukuphinda ungene kwiSicwangciso sakho seDijithali
NgoLwesithathu, uDisemba 5, 2012 NgoLwesibini, nge-4 kaDisemba ngo-2012 UCaroline Watts
Ukubuyisela umva kwakhona, umkhwa wokuhambisa iintengiso kubantu ebebekade bezibandakanya nawe kwi-Intanethi, uye waba sisithandwa sehlabathi lentengiso yedijithali, kwaye ngesizathu esihle: inamandla amakhulu kwaye iyabiza kakhulu.
Ukuphinda ubeke enye into, ngeendlela zayo ezahlukeneyo, kungasebenza njengokuncedisa kwisicwangciso esele sikhona sedijithali, kwaye kunokukunceda ufumane okuninzi kumaphulo osele uwaqhuba. Kule posi ndiza kugubungela iindlela ezimbalwa abathengisi abanokuthi baphinde bazimisele ukukhulisa amandla eziteshi abasele bezisebenzisa. Kodwa okokuqala, nantsi imvelaphi ethe kratya kwitekhnoloji uqobo:
Isebenza njani kwaye kutheni isebenza kwakhona
Ngendlela elula, ukubuyisela kwakhona isebenzisa i-cookie elula, engaziwayo yokuhambisa iintengiso kuphela kubantu abatyelele iwebhusayithi yakho kodwa bashiya ngaphandle kokuthenga. Isebenza kakhulu kuba ijolise kwiintengiso zakho kubantu abaqheleneyo kwaye abanokuba nomdla kwimveliso okanye kwinkonzo yakho. Oku kukuvumela ukuba wandise uguquko phakathi kwamaqela anomdla kwaye ugcine iindleko ziphantsi ngokugcina iidola zakho zentengiso kubaphulaphuli bakho abafanelekileyo.
Itekhnoloji efanayo inokusetyenziswa kolunye unxibelelwano lwabathengi, njengokuvula i-imeyile, kwaye inokuba sisincedisi esisebenzayo kwezinye izixhobo zokuthengisa ozisebenzisayo ukufikelela kubathengi abatsha okanye ukunxibelelana nezangoku.
Ukujikisa kwakhona ukuKhangela abathengisi
Ukuba uchitha uhlahlo-lwabiwo mali olubalulekileyo Ukukhangela kwePPC, ukuphinda ujonge kwakhona kufuneka ngokuqinisekileyo kongezwe kwivenkile yakho yedijithali. Ukukhangela iintengiso yenye yeendlela ezinamandla zokuqhuba ukugcwala kwabantu kwindawo yakho, kodwa ingakanani loo ndlela yokuguqula kutyelelo lokuqala? Ukuba ufana nabathengisi abaninzi, uninzi lwabantu obazisa kwindawo yakho abaguquki kwangoko, ukuba bayaguquka konke konke. Kulapho ukuphinda ucwangcise izinto kungena khona. Ukujikisa kwakhona kukunceda wandise uguquko phakathi kwamathemba abalulekileyo abatyelele indawo yakho, kodwa bengakhange bathenge nto.
Ukuba uthembele kakhulu kukhangelo lwe-PPC, ubhatala imali elungileyo ukuzisa abantu kwindawo yakho, kwaye ukuphinda ujonge ekujongeni kwakhona kunokukunceda wandise inkcitho. Ukuba usebenzisa amaphepha omhlaba azinikeleyo ekukhangeleni ukugcwala kwitrafikhi yakho, kulula ngokulula ukuphinda ujonge iindwendwe kwiphepha lakho lokufika.
Ukubuyisela kwakhona abathengisi beMxholo
Omnye wemiceli mngeni emikhulu umxholo wentengiso Iguqula abafundi ukuba babe ngabathengi rhoqo. Nangona umxholo wentengiso uyindlela esebenzayo esebenzayo yokukhuthaza utyelelo olutsha lwewebhu, i-ROI elungileyo ihlala kunzima kakhulu ukuyiphumeza. Ukukhuthaza ukubhaliswa kwe-imeyile kunye nokusoloko ukongeza ixabiso kunokunceda, kodwa akunakuhlala kwanele. Ukuba uqhuba ngempumelelo ukugcwala kwimixholo yakho, kodwa awuluboni uguquko onokuthanda, ukubuyela umva kunokunceda.
Unokuphinda ujonge iindwendwe eziya kwindawo yakho ukuze zifunde umxholo wakho, kwaye ubakhuthaze ukuba bajonge imveliso kunye namaphepha enkonzo. Umxholo wakha abaphulaphuli abafanelekileyo kwishishini lakho, kwaye ukuphinda ujonge ekujongeni kunokukunceda uguqule abo baphulaphuli babe ngabathengi.
Ukubuyisela kwakhona abathengisi be-imeyile
Ukuthengisa nge-imeyile sisixhobo esisisiseko kubathengisi abaninzi bedijithali. Ukuba ujolise kwi-imeyile, isenokungabonakali ukuba isixhobo sokubonisa sokubonisa njengokuphinda usete kwakhona sinokunceda njani, kodwa ukuphinda ujonge i-imeyile sisixhobo esifanelekileyo kubathengisi be-imeyile.
Ukujongwa kwakhona kwe-imeyile kukuvumela ukuba ubonise intengiso kuye nakubani na ovula i-imeyile, nokuba bayacofa okanye hayi. Khawufane ucinge ukuba wonke umntu ovula ii-imeyile zakho unokubona uphawu lwakho ngelixa ekhangela kwiwebhu kamva? Yiyo kanye into enokuphinda uyenze nge-imeyile. Ungathumela ii-imeyile ezininzi ngaphandle kokugqiba uluhlu lwakho, kwaye ukubuyisela kwakhona i-imeyile kunika ithuba lokuhlala phambi kwabamkeli bakho be-imeyile ngaphandle kokubangxolisa ngemiyalezo egqithisileyo ye-imeyile.
Ukuba uyathandabuza ukuqala umkhankaso wokubonisa kuba sele uqhuba amaphulo entengiso anempumelelo, uloyiko lwakho alunakuba luchanekile. Ukuphinda ubeke enye into kunokukunceda ufumane okuninzi kumajelo osele uwasebenzisa, nokuba yeyiphi na imigudu enokuba yiyo.
tags: ukuphinda ujonge umxholoukujongwa kwakhona kwe-imeyileukukhangela ukuhlawula kwakhonaUkubuyisela kwakhona i-ppcukubuyisela kwakhona
UCaroline Watts ngumphathi wentengiso e Ukubuyisela kwakhona, Umboneleli ngenkonzo epheleleyo ebonisa ukujolisa ekujongeni nasekujoliseni abaphulaphuli.
I-Metric zoMthombo: Ukulungiswa kweNtengiso yeNtlalontle kunye noHlalelo